प्राधिकरणको नयाँ महसुल दर : घरायसी ग्राहकलाई १० युनिटको रु. ६० मात्र ,मध्यम वर्गले बढी तिर्नुपर्ने - samayapost.com
प्राधिकरणको नयाँ महसुल दर : घरायसी ग्राहकलाई १० युनिटको रु. ६० मात्र ,मध्यम वर्गले बढी तिर्नुपर्ने
समयपोष्ट २०७४ साउन १६ गते १०:५२
घरायसी ग्राहकले औसतमा १० युनिट विद्युत् प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले ती वर्गका ग्राहकले ६० रुपैयाँ मात्रै महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।
प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा ११ देखि ४० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकले प्रतियुनिट सात रुपैयाँका दरले महसुल तिर्नुपर्नेछ । औद्योगिक ग्राहकले भने हाल तिरेको भन्दा करिब २० प्रतिशत बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले जति बढी विद्युत् प्रयोग गर्यो त्यति बढी महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले शहरीया ग्राहकले प्रतियुनिट १२.५० रुपैयाँसम्म तिर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
भारतबाट हाल ३८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । त्यसमा विहारबाट किनिएको विद्युत् प्रतियुनिट १० रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात भएको विद्युत्को मूल्य मात्रै ५.२८ रुपैयाँ पर्छ । आगामी हिउँदमा थप एक सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी भइरहेकाले थप महसुल तिर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणको घाटा उल्लेख्य रुपमा घट्न जाँदा आर्थिक अवस्था क्रमशः सुदृढ हुने दिशामा अगाडि बढेको छ । आव २०७२\_७३ मा वार्षिक आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण आव २०७३\_७४ मा नोक्सानीमात्रै एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ ।
गत वर्ष प्राधिकरणले भारत र स्वदेशका निजी उत्पादकबाट २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बिजुली खरिद गरेको छ । कुल खरिदमध्ये भारतबाट मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेको हो ।
करिब ३५ प्रतिशत जनता अझै पनि २४सै घन्टा विद्युत्भार कटौतीको मारमा छन् । सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट समुदायले सो पहलमा विद्युत् सेवा दिने प्रयास गरेको भए पनि लगानी र व्यवस्थापनका कारण सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले विद्युत् सेवा नपुगेका सबै जिल्ला र बस्तीमा योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम अगाडि सारेको जनाएको छ ।रासस